UJohn kunye neeVangeli zeSixikethi (ukungafani)
Ukuchaza ukungafani phakathi kukaYohane kunye neeVangeli zeSixikethi
Izichazi ezi-3 zesakhiwo kunye nesitayela seVangeli likaYohane
Ininzi abantu abanokuqonda ngokubanzi kweBhayibhile bayazi ukuba iincwadi zokuqala ezine zeTestamente eNtsha zibizwa ngokuba yiVangeli. Uninzi lwabantu luyaqonda kwakhona kwinqanaba elibanzi iincwadi zeVangeli zixelela ibali likaYesu Kristu-Ukuzalwa kwakhe, ubulungiseleli, iimfundiso, imimangaliso, ukufa nokuvuka.
Yiyiphi ininzi abantu abangayaziyo, nangona kunjalo, ukuba kukho ukuhlukezeka okukhulu phakathi kweeVangeli ezintathu zokuqala-uMathewu, uMarko, noLuka, owaziwa kunye kunye neeVangeli ze-Synoptic kunye neVangeli likaYohane.
Enyanisweni, iVangeli likaYohane liyingqayizivele kangangokuba iipesenti ezingama-90 zezinto eziqulethelene nobomi bukaYesu azifumaneki kwezinye iincwadi zeVangeli.
Kukho ukufana okuphambili kunye nokungafani phakathi kweVangeli likaYohane kunye neeVangeli ze-Synoptic . Zonke ezine iincwadi zeVangeli ziyancedisa, kwaye zonke ezine zithetha ibali elifanayo elisisiseko ngoYesu Kristu. Kodwa akukho khanyela ukuba iVangeli likaYohane ihluke kakhulu kwezinye iintathu kwiitoni zombini kunye nomxholo.
Umbuzo omkhulu kubayini? Kutheni uYohane ebhala ingxelo ebomi bukaYesu ehluke kwezinye iincwadi zeVangeli ezintathu?
Isikhathi Yinto Yonke
Kukho iinkcazelo ezininzi ezisemthethweni ngokuchasene okukhulu kwimixholo kunye nesitayela phakathi kweVangeli likaYohane kunye neeVangeli zeSixikethi. Eyokuqala (kwaye ngokude elula) amaziko eenkcazo kwimini nganye yeVangeli.
Abaninzi abaphengululi beBhayibhile bakholelwa ukuba uMarko wayengowokuqala ukubhala iVangeli yakhe-mhlawumbi phakathi kwe-AD
55 no-59. Ngenxa yesi sizathu, iVangeli likaMarko libonisa ngokukhawuleza ubomi nobulungiseleli bukaYesu. Kubhalwe ngokuyinhloko kubaphulaphuli beentlanga (mhlawumbi amaKristu angamaYuda ahlala eRoma), le ncwadi inikela ngethuba elifutshane kodwa elinamandla kwibali likaYesu kunye neempembelelo zalo.
Abaphengululi banamhlanje abaqinisekanga ukuba uMarko walandelwa ngokulandelayo nguMateyu okanye uLuka, kodwa bayaqiniseka ukuba zombini iiVangeli zasebenzisa umsebenzi kaMarko njengomthombo wasiseko.
Enyanisweni, malunga neepesenti ezingama-95 zomxholo kwiVangeli kaMarko zifaniswe kwizinto ezidibanisiweyo zikaMathewu noLuka. Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi eyokuqala, mhlawumbi ukuba uMateyu noLuka babhalwa ngenye indlela phakathi kwexesha lama-50 ukuya ngasekuqaleni kwe-60 AD.
Oko okusixelela ukuba iincwadi ze-Synoptic zibhalwe ngexesha elifanayo ngexesha le-1 leminyaka ye-AD. Ukuba wenza izibalo, uya kuqaphela ukuba iiVangeli eziManyeneyo zabhalwa malunga ne-20-30 kwiminyaka emva kokufa kukaYesu nokuvuswa kwakhe - malunga nesizukulwana. Oko kusixelela kukuba uMarko, uMateyu noLuka baziva bexinzelelekile ukuba babhale iziganeko ezibalulekileyo zobomi bukaYesu ngenxa yokuba isizukulwana esipheleleyo sadlulile ekubeni ezo zenzeke ziganeko, ezithetha ukuba iingxelo zokuzibonela kunye neemithombo ziza kuphelela. (ULuka uthi ezi zinto zivulekileyo ekuqaleni kweVangeli yakhe-jonga uLuka 1: 1-4.)
Ngenxa yezizathu, kunengqiqo ukuba uMateyu, uMarko, noLuka balandele indlela efanayo, indlela kunye nendlela yokuhamba ngayo. Bonke babhalwa ngombono wokupapasha ngokuzithandela ubomi bukaYesu kubaphulaphuli abathile ngaphambi kokukhawuleza.
Iimeko ezijikeleze iVangeli yeLine zahluke, nangona kunjalo. UYohane wabhala ingxelo yakhe ngobomi bukaYesu isizukulwana esilandelayo emva kokuba abalobi be-Synoptic babhale imisebenzi yabo-mhlawumbi nangomhla wokugqibela kwiminyaka eyi-90 AD.
Ngoko ke, uYohane wahlala phantsi ukubhala iVangeli yakhe kwenkcubeko apho iingxelo ezicacileyo zobomi nobulungiseleli bukaYesu sele sele zikhona iminyaka emininzi, zazikhutshwe amashumi eminyaka, kwaye zaye zafundiswa zixutyushwa iminyaka emininzi.
Ngamanye amagama, kuba uMateyu, uMarko, noLuka baphumelele ekuqulunqeni ngokusemthethweni ibali likaYesu, uYohane akazange azive ingcinezelo yabo yokugcina ingxelo epheleleyo yembali yobomi bukaYesu-eyayiyenziwe. Kunoko, uYohane wayekhululekile ukwakha iVangeli yakhe ngendlela ebonisa iimfuno ezahlukeneyo zexesha lakhe kunye nenkcubeko.
Ingcaciso yesibini yokuba uYohane ekhethekileyo phakathi kweeVangeli ihambelana neenjongo eziphambili zeVangeli nganye, kunye neengqungquthela eziphambili ezibhalwa ngumlobi ngamnye weVangeli.
Ngokomzekelo, iVangeli likaMarko ibhaliwe ngokuyinjongo ngenjongo yokuthetha ibali likaYesu kwisizukulwana samaKristu angamaYuda ayengazange abe ngumbono obubonekayo kwiimbali zobomi bukaYesu.
Ngenxa yoko, enye yeengqungquthela ezibalulekileyo zeVangeli kukubonakaliswa kukaYesu ngokuthi "uNyana kaThixo" (1: 1; 15:39). UMarko wayefuna ukubonakalisa isizukulwana esitsha samaKristu ukuba uYesu ngokwenene wayeyiNkosi noMsindisi wabo bonke, nangona wayengasayi kuphinda abe ngumzimba.
IVangeli likaMathew labhalwa kunye nenjongo ehlukeneyo kunye nabaphulaphuli abahlukeneyo engqondweni. Ngokukodwa, iVangeli likaMateyu lalibhekiswe ikakhulu kubaphulaphuli abangamaYuda kwi-1 leminyaka-inyaniso eyenza ingqiqo ecacileyo yokuba inxalenye enkulu yokuqala yaguqulelwa ebuKristwini yayingamaYuda. Enye yeengqungquthela ezinkulu zeVangeli kaMateyu kukuxhamla phakathi kukaYesu kunye neziprofeto zeTestamente Endala kunye neziprofeto ngokuphathelele uMesiya. Okubalulekileyo, uMathewu wayebhalela ukubonisa ukuba uYesu unguMesiya kwaye abaphathi bamaYuda bemihla kaYesu bamlahlile.
NjengoMarko, iVangeli likaLuka ekuqaleni yayijoliswe ikakhulu kubaphulaphuli beeNtlanga-inxalenye enkulu, mhlawumbi, kuba umbhali ngokwakhe wayeyintlanga. ULuka wabhala iVangeli yakhe ngenjongo yokubonelela ingxelo echanekileyo neyithembekileyo yokuzalwa kukaYesu, ubomi, ubulungiseleli, ukufa nokuvuka (Luka 1: 1-4). Ngeendlela ezininzi, ngelixa uMarko noMathewu befuna ukudibanisa ibali likaYesu kubaphulaphuli abathile (iintlanga kunye namaYuda, ngokulandelanayo), injongo zikaLuka zazingxolisekanga kwindalo. Wayefuna ukubonisa ukuba ibali likaYesu linyani.
Ababhali beeVangeli ze-Synoptic bafuna ukuqinisela ibali likaYesu kwimbali yembali kunye nexolo.
Isizukulwana esasibonile ibali likaYesu sasifa, kwaye abalobi befuna ukuboleka ukuthembeka nokuhlala amandla kwi siseko salebandla-ikakhulukazi ukususela ngaphambi kokuwa kweYerusalem ngo-AD 70, ibandla lalikho isithunzi seYerusalem kunye nokholo lwamaYuda.
Iinjongo eziphambili kunye neengqungquthela zeVangeli likaYohane zahluke, oku kunceda ukucacisa okungafaniyo kwesicatshulwa sikaYohane. Ngokukodwa, uYohane wabhala iVangeli emva kokuwa kweYerusalem. Oko kuthetha ukuba wabhalela inkcubeko apho amaKristu afumana ubunzima obubandezelo kungekhona nje kwizandla zamaYuda kodwa ubukhosi boBukumkani baseRoma.
Ukuwa kweYerusalem kunye nokusabalalisa kwecawa kwakunokwenzeka ukuba enye yezinto ezenza ukuba uYohane ekugqibeleni abhale ingxelo yeVangeli. Ngenxa yokuba amaYuda aye ahlakazekile kwaye adidekile emva kokutshatyalaliswa kwethempeli, uYohane wabona ithuba lokushumayela ukunceda abaninzi ukuba uYesu unguMesiya - ngoko ke ukuzaliseka kwetempile kunye nemibingelelo (Yohane 2: 18-22) ; 4: 21-24). Ngendlela efanayo, ukunyuka kwamaGnostic kunye nezinye iimfundiso zobuxoki ezixhomekeke ebuKristwini kwanikeza ithuba lokuba uYohane acacise ezinye iinkalo zezobubhalo kunye nezimfundiso esebenzisa ibali lobomi bukaYesu, ukufa nokuvuka kwakhe.
Ezi ntlukwano ngenjongo zihamba ixesha elide ukuchaza ukungafani kwindlela kunye nokugxininisa phakathi kweVangeli likaYohane kunye ne-Synoptics.
Ingcaciso yesithathu yokwehluka kweVangeli likaYohane ixhala ngeendlela ezahlukeneyo zombhali weVangeli ezigxile ngqo kumntu nomsebenzi kaYesu Kristu.
KwiVangeli likaMarko, umzekelo, uYesu uchazwa ngokuyinhloko njengoNyana kaThixo onamandla, osebenza ngokumangalisayo. UMarko wayefuna ukusekwa nguYesu kwisiseko sesikhulu esitsha sabafundi.
KwiVangeli likaMateyu, uYesu ubonakaliswa njengesizaliso soMthetho weTestamente Endala neziprofeto. UMateyu uthatha ubuhlungu obukhulu ukuvakalisa uYesu kungekhona nje ngokuba uMesiya waprofetha kwiTestamente Endala (bona uMateyu 1:21), kodwa njengokuba uMoses omtsha (izahluko 5-7), uAbraham omtsha (1: 1-2), kunye umzuzwana wendlu kaDavide (1: 1,6).
Ngoxa uMatthew egxile kwingqalelo kaYesu njengosindiso olulindelekileyo lwamaYuda, iVangeli yeLuka igxininise ukuba uYesu ube nguMsindisi wabo bonke abantu. Ngako oko, uLuka udibanisa ngenjongo yokuba uYesu adibanise uYesu kunye nabaninzi abasusiweyo emphakathini wemihla yakhe, kuquka nabasetyhini, abampofu, abagulayo, abanamademoni kunye nokunye. ULuka ubonisa uYesu kungekhona nje njengoMesiya onamandla kodwa nokuba ngumhlobo kaThixo waboni abaza ngokucacileyo ukuba 'bafune kwaye basindise abalahlekileyo' (Luka 19:10).
Isishwankathelo, ababhali be-Synoptic babecala ngokubaluleka kwimiba yabantu ekubonakalisweni kukaYesu-babefuna ukubonisa ukuba uYesu uMesiya wayexhunyiwe namaYuda, iintlanga, ukuxoshwa kunye namanye amaqela abantu.
Ngokwahlukileyo, ukubonakaliswa kukaJohane kukaYesu kukukhathalela i-teoloji ngaphezu kwamaqela. UJohn wayehlala ngexesha apho iingxabano zeengxoxo kunye neengxabano zaziye zanda-kuquka iGnostic kunye nezinye iingcamango ezaziphikisana nobuntu bukaThixo okanye ukuma kwabantu. Le ngxabano yayiyi-tip of spear ekhokelela kwiimpikiswano ezinkulu kunye namabhunga e-3 kunye neye-4 ekhulwini ( iBhunga laseNicaea , iBhunga laseConstantinople, njalonjalo) - ezininzi zazo zazizungeze imfihlelo kaYesu ubunjani bobabini ngokupheleleyo ngoThixo kunye nomntu ngokupheleleyo.
Okubalulekileyo, abantu abaninzi bemihla kaYohane babezibuza, "Ngubani na yena uYesu? Wayethanda ntoni na?" Iingcamango zokuqala ezingafaniyo zikaYesu zimbonise Yena njengendoda enhle kakhulu, kodwa kungekhona uThixo.
Phakathi kwezi mpikiswano, iVangeli likaYohane lihlolisisa uYesu ngokwakhe. Eyona nto inomdla ukuphawula ukuba ngelixa igama elithi "ubukumkani" lithetha nguYesu amaxesha angama-47 kuMathewu, amaxesha angama-18 kuMarko, kunye namaxesha angama-37 kuLuka - kuthethwa ngamaxesha amahlanu nguYesu kwiVangeli likaYohane. Ngexesha elifanayo, ngelixa uYesu esithetha isimemezo esithi "mna" ngamaxesha angama-17 kuphela kuMathewu, amaxesha ama-9 kuMarko, kunye namaxesha aphindwe ma-10 kuLuka - uthi "mna" ngamaxesha angama-118 kuYohane. Incwadi kaYohane imayelana noYesu ichaza ubunjani bakhe kunye nenjongo ehlabathini.
Inye yeenjongo ezinkulu kunye neempendulo zikaYohane kwakukukuchaza ngokucacileyo uYesu njengeLizwi likaThixo (okanye iLogos) - uNyana owake waphila onguMnye noThixo (Yohane 10:30) kodwa wathatha inyama ukuze "amise" ngokwakhe phakathi kwethu (1:14). Ngamanye amazwi, uJohn wathatha ezininzi iintlungu ukuze enze i-crystal ibonakale ukuba uYesu wayeyinyaniso kaThixo ngomntu.
Zine iincwadi zeVangeli zeTestamente eNtsha ngokugqibeleleyo njengezigaba ezine zebali elinye. Nangona kuyi nyaniso ukuba iincwadi zeVangeli ezifanayo zifana nezindlela ezininzi, ukungafani kweVangeli likaYohane kuzuza kuphela ibali elikhulu ngokuzisa umxholo okongezelelweyo, iingcamango ezintsha, kunye nengcaciso ecacileyo ngakumbi ngoYesu ngokwakhe.
Iintlaphalelo zeVangeli zeSidlo sokugqibela
UYona 2: Isahluko seSahluko seBhayibhile
UMoses kunye neNtshumayelo yokutshisa - Intetho yeBhayibhile
Imfazwe yaseYeriko Ibali leBhayibhile
UYesu uhlwaya iilwanyana ezineedemon (Marko 5: 10-20)
UYesu ubiza abaPawulos abalishumi elinesibini (Marko 3: 13-19)
Ngaba iVangeli likaMarko yabhalwa nini?
Kutheni i-Number 7 ingumthombo weLunga
UYesu udla amawaka amane (Marko 8: 1-9)
UWinnie wePooh Jars Imifanekiso kunye namaxabiso
Igalari yeSithombe - I-Guinness IiRekhodi zehlabathi kunye nemizamo
I-Best Swiss Quotes Quotes
Ukubhalwa kweNkokeli okanye uLede kwiSiqendu
Amanzi angcwalisiweyo kwiSikolo
Izizathu ezili-10 eziphezulu zokuthenga i-Jeep Wrangler Unlimited
Iingcaphuno zokukhuthaza ukuthengisa nokuthengisa
De Broglie Equation Inkcazo
UManjusri, uBuddhist Bodhisattva woBulumko
U-Vrais unobungane - isiNgesi isiNgesi iCognates-S
Yazi Abadlali abaPhambili be-Volleyball yabasetyhini abaPhambili
Iimpawu zeKhomishana zeHlabathi
Yintoni eyahlukileyo phakathi kwe-Commonwealth kunye neRhulumente?
Quotes ka Leo Tolstoy
Ngo-1951 - uWinston Churchill kwakhona uNdunankulu waseBrithani enkulu
Yiyiphi iNgoma yeNdaba?
Ukuhlola i-Blue Planet uranus
Inkcazo kunye neMimiselo ye-Anti-Rhetoric
I-Mercury eSagittarius - I-Sagittarius Mercury yakho
I-Taylor Swift Biography
Gemini kunye noxinzelelo
Iimpawu ezigqwesileyo zikaDonald Trump Protest